गर्भावस्थामा किन हुन्छ उच्च रक्तचाप ? - SatyaPatrika
२०७८ मंसिर ५, आईतवार प्रकाशित
डा. सजिप्ता पन्त (प्रसुती तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ) कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेत ।
गर्भावस्था आफैंमा एउटा जोखिमपूर्ण अवस्था हो । यस अवस्थामा जबसम्म बच्चा जन्मिदैन तबसम्म गर्भवती महिला सचेत रहनुपर्छ । गर्भको अवधि २० हप्ता अर्थात् करिब ५ महिना भएपछि रक्तचाप बढ्छ । यस्तो अवस्थामा गर्भको शिशु तथा आमाको मृत्यु हुने खतरा हुन्छ ।
यस किसिमको रक्तचाप गर्भको कारणले वा शालनालaको कारणले हुने गर्छ । विशेष गरी १८ देखि २२ वर्ष उमेरका महिलाहरुले गर्भाधारण गर्दा उच्च रक्तचाप हुने खतरा हुन्छ । साथै ३० वर्ष माथि उमेर पुगिसकेका महिलाहरु, पहिलो गर्भंअवस्थामा रक्तचाप बढि छ भने अर्को पटक पनि हुने सम्भावना रहन्छ ।
जुम्ल्याहा बच्चा भएकको अवस्थामा पनी रक्तचाप बढ्ने डर हुन्छ । यसका साथै घरका अग्रज सदस्यहरूमा उच्च रक्तचापको समस्या भएका महिलामा गर्भवती हुँदा उच्च रक्तचाप हुने समस्या बढी रहने गर्छ । त्यसैगरी, पहिलोपटक गर्भवती हुने महिलामा यस्तो समस्या बढी मात्रामा देखापर्ने गर्छ ।
गर्भावस्थाका बेला शालबाट निस्किने, अथवा शरीरले निकाल्ने हर्मोनको कारणले रक्तचाप बढ्ने गर्दछ । शरीरबाट निस्कने केमिकल्सले गर्दा रगतको नलीहरुको प्रेसर बढ्ने भएकोले रक्तचाप बढ्न जान्छ । गर्भाअवस्थासँग सम्बन्धित रक्तचाप अन्य बेलाको जस्तो खाना र तनावले असर गर्दैन । शालबाट नै निस्कने तत्वहरुले गर्दा रक्तचाप बढ्ने गर्छ ।
असरहरु : –
गर्भावस्थामा हुने उच्च रक्तचापको असर आमा तथा बच्चा दुवैमा पर्ने गर्छ । यस अवस्थामा हुने उच्च रक्तचापको समस्याका कारण बच्चाले राम्रोसँग सर्कुलेसन पाउन सक्दैन । यसले प्रत्यक्ष रूपमा रक्तनलीमा असर गर्ने भएकाले बच्चाले आमाको पेटभित्र आवश्यक मात्रामा पोषकतत्वहरू पाउन सक्दैन । रक्तचापको मात्रा अति नै उच्च भएको अवस्थामा बच्चा खेर जानसमेत सक्छ । साथै, बच्चाको वृद्धि तथा विकास आवश्यक मात्रामा हुन सक्दैन ।
र रगतको नलीहरुमा रक्तचाप बढीसकेपछि शालको माध्यामबाट बच्चामा जाने रगत संचारलाई असर गर्दछ । बच्चालाई रगतको मात्रा राम्रोसँग नपुग्ने, बच्चा कम तौंलको निस्किने, रगतको माध्यामबाट बच्चलाई आबश्यक पर्ने पोषण तत्व नपुग्ने हुन्छ । भने आमाको हात खुट्टाहरु सुनिने, टाउको धेरै दुख्ने, बान्ता हुने, पेट फुल्ने, आखा धमिलो देखिने हुन्छ ।
यस्तो समस्या आयो भने समयमै उपचार गर्नु पर्ने हुन्छ । यदि समयमै उपचार पाएन भने आमामा झड्का आउने, एक्कासि बेहोस भएर आमा लड्ने, जस्ले गर्दा श्वास श्वासमा, दिमागमा असर पर्न सक्ने हुन्छ । छाति र फोक्सोमा पानी जम्ने हुनसक्छ । यो अबस्थामा पनी राम्रो उपचार पाउन सकेन भने आमाको ज्यानै समेत जान सक्छ । उच्च रक्तचाप तत्काल उपचार चाहिने कन्डिसन मध्यको एक हो ।
उच्च रक्तचाप अथवा गर्भाअवस्थामा हुन सक्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी जटिलताहरुबाट बच्न सुरुदेखिनै राम्रो चेकजाँच गर्ने । प्रेसर, हात खुट्टा सुनिएको छ वा छैन रु आँखा धमिलो देखिने अथवा अन्य केहि लक्षण छ छैन भनेर जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै निरन्तर स्वाथ्यकर्मीको सल्लाह लिने र गर्भवती महिलाले आफ्नो गर्भावस्थाभरमा स्वास्थ्यसँस्था कम्तीमा ४ पटक गर्भ जाँच गराउनु पर्दछ ।
पहिलो जाँच गर्भ रहेको थाहापाए देखि ४ महिना भित्रममा, दोस्रो जाँच ४ देखि ६ महिना भित्रमा, तेस्रो जाँच ६ देखि ८ महिना भित्रमा, चौथों जाँच ८ देखि ९ महिना भित्रमा अथवा स्वास्थ्यकार्यकर्तालाई भेट्नु पर्छ भन्ने लागेका बेलामा वा गर्भवती अवस्थाको समयमा कुनै खतराको लक्षण देखा परेमा तुरुन्तै स्वास्थ्यसंस्थामा गएर जाँच गराउनु पर्दछ।
गाउँपालिकाको खाता शून्य बनाएको अध्यक्षको आरोप
ठाँटीमा जारी भलिवल प्रतियोगितामा यी चार टोली प्रवेश गरे सेमीफाइन